आशिष पौडेल, असार ११, २०७९
उहाँको बुवा सामान्य साक्षर मात्र हुनुहुन्थ्यो । पेशाले कृषक तथा आर्थिक हिसाबले भन्नुपर्दा मध्यम वर्गीय परिवार । आमा भने निरक्षर तथा गृहिणी । तर मावली हजुरबुवाहरु भने पढे लेखेको भएको हुँदा आमाले भने श्लोकहरु हाल्ने तथा सूत्रहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो सानोमा...
आशिष पौडेल, जेठ २८, २०७९
उहाँको पैतृक थलो ओखलढुंगाको लेती लिखु हो । पोकली छाँगोको छेउ वनपाले भन्ने ठाउँ हो । वनपाले भनेको देवी थानको मुख्य जिम्मा लिएर गर्ने काम गर्ने कारणले भनिएको हो । देवी थान, कुल देवतास्थान रक्षा गर्ने जिम्मेवारी उहाँको पितापुर्खाको हो।उहाँको...
आशिष पौडेल, जेठ २१, २०७९
चिकित्सक पिता सतिश चन्द्र विश्वासको आफ्नै औषधालय थियो जनकपुरमा । उहाँको पिताजी बंगाली हुनुहुन्थ्यो । पढेर आइसकेपछि उहाँ जनकपुर आउनुभयो । विदेशी मानिस काम गर अनि घरधन्दा पनि गर भन्दा त्यति सजिलो रहेन जीवन त्यसपछि उहाँले जनकपुरमा नै विवाह गर्नुभयो...
विश्वविमोहन श्रेष्ठ: वामपन्थीमा छात्रवृत्ति, कांग्रेसीमा जागिर र दरबारियामा पदक नपाउने सर्जक !
आशिष पौडेल, जेठ १४, २०७९
२०३५ सालमा काठमाडौँआएपछि रुसको छात्रवृत्ति खुल्यो । उहाँले निवेदन दिनुभयो । उहाँको नाम लिखित तथा अन्तर्वार्तामा एक नम्बरमा निस्कियो । सुटकेश किन्ने देखि सबै किसिमको तयारी भयो । तर, जाने बेला भइसक्दा पनि भरे भोलिको मात्र उत्तर आयो । जाने...
आशिष पौडेल, बैशाख ३१, २०७९
जेन कवितामा रमिरहनु भएका प्रसाईंका घामको आयु पुस्तकबाट शीर्षक नभएका चार वटा जेन कविताहरु यस्ता छन् । ००० असङ्ख्य प्रहार सहँदै ढलिरहेको रुखलाई थाहा थिएन उसलाईढाल्ने बन्चरोको बिँड उसैको हाँगोबाट निर्मित थियो । ००० जब अंशवण्डाको कुरा उठ्यो मुस्किल पर्यो...
लोकसंवाद संवाददाता, बैशाख २४, २०७९
उहाँको जन्म २०२२ सालमा धरानमा भएको हो । उहाँको पिताजी ब्रिटिश आर्मी अन्तर्गत सिंगापुर पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो । आमा भने सरकारी स्कूलको शिक्षिका । त्यस हिसाबले पनि उहाँको आर्थिक अवस्था राम्रै थियो । के लाउ र के खाउको स्थिति थिएन ।...
आशिष पौडेल, बैशाख १७, २०७९
उहाँ कानपुर गएर संगीत सिक्दै हुनुहुन्थ्यो । बसेको ठाउँमा नै गोली चल्यो । त्यहाँबाट भागाभाग भएर हिँड्नुपर्यो। पछि फेरि बनारस गएर स्टेज कार्यक्रममा छनोभएर भारतको मध्यपुरमा पनि उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो । जस कमाउनुभयो । तर, विडम्बना ! घरमा आमा बिरामी...
आशिष पौडेल, बैशाख १०, २०७९
उहाँकाबुबाकपडाको व्यापारी । तर, उहाँलाई भने व्यावसाय मनपरेन । उहाँको जन्म २०१२ सालमा काठमाडौंको भेडासिङमा भएको हो । भन्नुहुन्छ, स्वर सम्राट नारायण गोपालको जन्मस्थान पनि त्यही हो । भेडासिङको नेवारी टोलमा हुर्किएकाले होला, उहाँलाई नेवारी मजाले बोल्न आउँछ । उहाँको...
जीवन योञ्जन, बैशाख ५, २०७९
जन्म भएकै मृत्यु हुन हो । मृत्यु निश्चित छ । अनिश्चित भनेकै मृत्युको समय मात्र हो । जीवनको अन्तिम मृत्यु हो । र, मृत्युपछिका मानिसका आआफ्नै संस्कार हुन्छन् । हामी नेपालीहरूको यही मृत्युको समयमा संस्कारमा सर्वाधिक कोही खोजिन्छन् भने उनी...
डा. शैलेन्दु प्रकाश नेपाल: भाग्यले बचाएका र भोगमा विश्वास गर्ने नेपाली वाङ्मयका साधक
आशिष पौडेल, बैशाख ३, २०७९
एक पटक उहाँको (शैलेन्दु प्रकाश नेपालको) फुपू कहाँ स्वस्थानीको साङ्गेको पूजामा उहाँको पिताजीलाई निम्ता गर्न आएकोमा पिताजीले फुर्सद नभएका कारण उहाँलाई लिएर जान भन्नुभयो । उहाँको उमेर त्यसबेला साढे तीन वर्षको थियो । उहाँ त्यसबेला गाईका बाच्छा फुकाएर खेदाउने काम...
लोचन भट्टराई : आधुनिक गीतदेखि छन्दको लत हुँदै मातसम्म
आशिष पौडेल, चैत्र २६, २०७८
२०४४ सालमा आधुनिक गीततर्फ प्रथम भएपछि निर्माण भएको लोचन भट्टराईको परिचय भने आधुनिक गायिका नै हो । यस अर्थमा पनि उहाँका आधुनिक गीत नै धेरै छन् । तर, जब २०५४ सालमा म्युजिक नेपालले भानुभक्तीय रामायणलाई छन्दमा वाचन गराउने काममा उहाँले...
सनत रेग्मी : चाट, चन्दा मामा, चिट्टुबाबूदेखि 'साह्रै बदमास' विद्यार्थीसम्म
आशिष पौडेल, चैत्र १९, २०७८
सानो बेलामा सनत रेग्मीलाई पितामहले सानो, राम्रो चिटिक्क परेको हुनाले चिट्टुबाबू भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो । तर, नेपालगन्जमा धेरै मधेसी मूलका मानिसहरूको बसोबास हुने अनि उनीहरूले चिट्टुबाबूको अर्थ नबुझेर टिक्कुबाबू भनेर बोलाउँथे । उहाँले २०२० सालमा बाल्यकालमा नाटक पनि खेल्नु भएको...
गोपाल अश्क: भोजपुरी, हिन्दी र नेपाली भाषा-साहित्यका त्रिवेणी
आशिष पौडेल, चैत्र १२, २०७८
गोपाल अश्क अर्थात् गोपालप्रसाद सर्राफले एसएलसी दिएपछि के मात्र काम गर्नुभएन । अंग्रेजीको ट्युसन पढाउनदेखि मारवाडीको पसलमा सम्म काम गर्न भ्याउनुभयो । यी सबैको राम्रो अनुभव छन् उहाँको । बुबाले भनेर मारवाडीको पसलमा जानुभयो एक दिन काम गर्न । तर,...
अमर न्यौपाने : 'नेपालगन्ज', 'सोरेश सोनखर' र 'यमुना आमा'ले बनाएको सृजनशील लेखक
आशिष पौडेल, चैत्र ५, २०७८
२०६५ सालमा जर्मनीको गैरसरकारी संस्था त्यस बेलाको जिटिजेडले टाउन राइटर रेजिडेन्स प्रोग्राम (टिआरआरपी) भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको थियो । अमर न्यौपाने नेपालगन्जको लागि टाउन राइटरकोरुपमा छानिनु भयो । संस्थाको उद्देश्य लेखक बनाउने मात्रै होइन सृजनशीलता जन्माउने पनि थियो । एउटा...
डा‍‍‍. सृजना शर्मा : विद्यालय शिक्षा पुरा गर्न मात्र पनि छ जिल्ला चाहर्नुपर्ने बाध्यता !
आशिष पौडेल, फाल्गुन २१, २०७८
उहाँको बुबाको घर बैतडी । उहाँको बुबा पहिले बहिदार हुनुहुन्थ्यो । पछि भने न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँको बुबा स्कुल नजानु भए पनि हिसाब एकदमै आउने । बुबाले उहाँलाई एसएलसी दिने बेलासम्म पनि अंकगणित सिकाउनुहुन्थ्यो । उहाँ विभिन्न पुस्तक...
डा.पुष्करराज भट्टः लघुकथाको पहिलो पिएचडी, अन्तर्मुखी स्वभाव र संघर्षमय शैक्षिक जीवन
आशिष पौडेल, फाल्गुन १४, २०७८
एक पटक कक्षा ४ मा पढ्दासँगै पढ्ने साथीहरूले धकेल्दा पुष्करराज भट्टको हातमा चोट लाग्यो । चोट सामान्य होला भन्ने ठाने पनि हात सुन्निएर आएर प्लास्टर नै गर्नुपर्यो । वास्तवमा हात भाँच्चिएको नै रहेछ । यसले पढाइमा केही दिन बाधा पनि...
शंकर भारती: ६० रुपैयाँको संयोगै संयोग अर्थात् सिम्बल नम्बर १०३६२ ‘बी'!
आशिष पौडेल, फाल्गुन ७, २०७८
सम्पन्न परिवारका शंकर भारतीलाई केही गर्ने हुटहुटीले कुल्ली बनायो । आमालाई सुख दिने सपनाले कहिल्यै भारी नबोकेकाभारतीले चक्रपथ सर्भेका समयमा दैनिक ५ रुपैयाँ ज्यालादारीमा भारी बोक्नुभयो । भारीसँगै थाप्लोमा कहिल्यै नमेटिने घाउको खत पनि बोक्नुभयो । २०२८ सालमा चक्रपथ सर्भेका...
पवन ‘आलोक’ कँडेल: १४ वर्षमै प्रधानाध्यापक, ' नियात्रा पुरस्कार’का जीवित स्रष्टा
आशिष पौडेल, माघ २९, २०७८
पवन आलोक कँडेल१४ वर्षको उमेरमा एसएलसीपास गर्नेर विद्यालयकोप्रधानाध्यापक हुने व्यक्ति ! एसएलसी दिनका लागि फर्ममा १६ वर्ष लेखिए पनि केवल १४ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास भएलगत्तै उहाँ आफूलेपढेको सरस्वती प्राविमा प्रधानाध्यापक नियुक्त हुनुभयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भोजपुरले उहाँलाई नियुक्तिपत्र...